That's so good, right?: Doctor Story
Life Insurance စာမေးပွဲတစ်ခုအတွက် လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဒေါက်တာ ရုံးခန်းကို ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင် ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်း အမိုက်စားနဲ့ဆိုပေမယ့် တစ်ကိုယ်လုံးစစ်ဆေးရဦးမှာဆိုတော့ စိတ်ညစ်သလို ပဲဗျာ ခံစားရတာ။
အဲဒီဒေါက်တာဆီကို အရင်က ကျွန်တော်တစ်ခါမှမသွားခဲ့ဘူးပါ။ သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ စသဖြင့် ဘာမှကိုမသိခဲ့တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ နာမည်မသိ တွေ့နေကျမဟုတ်တဲ့ဆရာဝန်အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်ရမှာကို စိတ်ထဲသက်သောင့်သက်သာတော့မဖြစ်သလိုခံစားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရှေ့မှာ အ၀တ်အစားအကုန်ချွတ်ပြီး စစ်ဆေးခံရမှာလေ။
ဆေးခန်းထဲရှိ ဧည့်သည်ထိုင်ခုံတစ်ခုံမှာထိုင်ကာ စောင့်နေတုန်း အမျိုးသားသူနာပြုတစ်ယောက်က အတွင်းခံကလွဲလို့အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး အထဲဝင်ခဲ့ပါလို့လာခေါ်ရော။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ ဖုံးနိုင်ရဲ့လို့မျှော်လင့်ပြီး boxer ဘောင်းဘီတို ၀တ်လာတာ အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့။
စစ်ဆေးခန်းထဲလည်းရောက်ရောကြည့်နေတာ အမျိုးသားသူနာပြုနှစ်ယောက်ထက်မနည်း ၀င်ထွက်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးသူနာပြုတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရတာ တော်တော်ထူးဆန်းသလိုပဲဗျ။
ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်အစားတွေကိုချွတ် ခေါက်ပြုတဲ့ပြီး ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဝင်လာတော့ ကျွန်တော် မျက်လွှာပင့်ပြီး မသိမသာစူးစမ်းကြည့်မိတာမှာ အသက်က ၅၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိကာ တော်တော်သန့်ပြန့်တဲ့ မီးခိုးရောင်သန်းသော ဆံပင်များနှင့်လူတစ်ဦးပါပဲ။ ခန့်ငြားသော မှင်မောင်းကောင်းသော တကယ့်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ထိုင်နေရ တာ နည်းနည်းရှက်လာသလိုခံစားရပါတယ်။
သူက သာမန်အခြားသော စစ်ဆေးမှုများလိုပါပဲ မေးခွန်းအချို့မေးတယ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရှေ့မှာ ခပ်မတ်မတ်ရပ် ခိုင်းတာကြောင့် ကျွန်တော်သူ့နားတိုးကပ်သွားလိုက်ပါရဲ့။ သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုခြဲ သူ့အနားကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲယူကာ ဘောင်းဘီကိုလျှော့ချလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ ကျွန်တော့်မှာ Hernia ရှိမရှိ စမ်းသပ်တော့မဆယ်ဆိုတာလေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် လိင်အင်္ဂါဇာတ်ကို စစ်ဆေးဦးတော့မှာ။ အခြားသော အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ အ၀တ်မဲ့နဲ့နေရတဲ့အဖြစ်ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက အခုအချိန်ထိ သက်သောင့်သက်သာမရှိသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း ထို့အတူပါပဲ။
ကျွန်တော်ဘောင်းဘီကို ပေါင်တစ်ဝက်လောက်အထိ လျှောချလိုက်ပါတယ်။ အု…ဒေါက်တာက မပြောမဆို ရွှေဥတွေကို သူ့လက်ချောင်း တွေနဲ့တို့ထိစမ်းသပ်ပါတယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေထဲ ဟိုသည်ရောက်နေသလို ကျွန်တော်ခံစားရပါရော။ သူ့အနေနဲ့ အကျိတ်တွေရှိမရှိ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုရှိမလား စမ်းနေပုံရတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူ ဥတွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတာ ၂ မိနစ်လောက်သာကြာပေ မယ့် ကျွန်တော့်အတွက် တစ်ရက်လောက်ကြာတယ်ထင်နေတာ။ နောက်တော့ သူ ကျွန်တော့် ရွှေဥတွေရဲ့အောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းကို စမ်းသပ်ပါပြီ။ အဲဒါကို စမ်းသပ်စဉ်မှာချောင်းဆိုးခိုင်းပါတယ်။ အားလုံးကောင်းတယ်လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ ပြီးလဲပြီးရော ကျွန်တော့်လိင်တံကို သူ့လက်ထဲဝယ် အပေါ်ဘက်ဆွဲမလိုက်ပြီး သေချာကြည့်တယ်ဗျာ။ သူ့လက်တွေက အကြမ်းအရမ်းကိုင်တွယ်တာ မျိုးမဟုတ် ငြင်ငြင်သာသာနဲ့လှည့်ပတ်ကိုင်တာမျိုးလေ။ သူ ကျွန်တော့်လိင်တံခေါင်းကို အသာညှစ်ပြီး စစ်ဆေးနေတယ် ဆီးသွားပေါက် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကိုများလား။ ပြီးတော့ အခြားလက်တစ်ဖက်က လိင်တံအရင်းကို ခပ်တင်းတင်းလေးဖိညှစ်လိုက်ကာ လိင်တံခေါင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုရှိမရှိ အဲ…ပန်းသွေးရောင်ကနေ မရမ်းရောင်ပြောင်းသွားမသွားစစ်တယ်။ ကြည့်ရတာ ထွေထွေထူးထူးလုပ် ကိုင်နေဟန်မပေါက်ဘဲ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတဲ့ ပုံစံကျအနေအထားပါပဲဗျာ။
သူက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်လိင်တံမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တည်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်လိင်တံကို သူထိတွေ့ကိုင်တွယ်တာအပေါ် သာယာစပြုလာပြီ။ ကျွန်တော်သိတယ် ဒီလိုအတွေးခံစားမှုမျိုး မရှိသင့်ဘူး သို့မဟုတ် ယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့အကိုင်အတွယ်အပေါ်မူတည်ပြီး လိင်တံမာတောင့်လာတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာလေ။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းနောက်ကျသွားပြီ ဗျာ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူ့လက်တွေရဲ့အဖျစ်အညှစ်အကိုင်အတွယ်တွေကြားမှာ သွေးတွေတဆတ်ဆတ်ခုန်ရင်း စတင်ရမ်းခါလာပါပြီ။ သူ့လက်ထဲက ကျွန်တော့်လိင်တံရဲ့အပြောင်းအလဲအပေါ် ဒေါက်တာလည်း သတိထားမိဟန်တူပါတယ် လိင်တံထိပ်ပိုင်းကိုင်နေတာကို လွှတ်လိုက်ပြီး အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာကိုပဲဆက်လုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော် သုက်ရည်တွေကို အပြင်မထုတ်ဖြစ်တာ ၁၀ရက်လောက် ရှိနေပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ဟန်မဆောင်နိုင်စွာဘဲ လိင်တံက စတင်ကြီးထွားလာတာကိုရပ်တန့်လို့မရပါ။ အာ…တော်တော် ရှက်ဖို့ ကောင်းနေပြီဗျာ။ ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်သက်တာမှာ အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ လိင်တံတောင့်တင်းတဲ့အဖြစ်အပျက် ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ပျက်ခဲ့စဖူးပါ။ အခုတော့ လူကြီးအရွယ် ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲဝယ် ဘယ်လိုမှမထိန်းချုပ်နိုင်စွာဘဲ မာတောင့်နေပါပြီ။
ကျွန်တော့်လိင်တံ စမာတောင့်လာတာကို ဒေါက်တာလည်း သိပုံရတယ် သူ့လက်တွေနည်းနည်းလှုပ်ခါသွားတာဆိုတော့။ ကျွန်တော် သူတစ်ခုခုတော့ပြောပြီဆိုပြီး ကြောက်စိတ်တော့ဝင်သွားမိပါတယ်။
‘ဒေါက်တာ….ဆောရီး…ဒေါက်တာကိုင်ထားတာက အဲ့ဒီအထဲသွေးပိုလျှောက်အောင်လုပ်သလိုဖြစ်သွားလားမသိ အဲ…ကျွန်တော် ဘာပြောတယ်ဆိုတာ ဒေါက်တာသိမှာပါနော်’ ကျွန်တော်လေသံခပ်တိုးတိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။
‘ဆရာ သတိထားမိပါတယ်’ သူ့လက်တွေကို ကျွန်တော် လိင်အင်္ဂါစပ်ကနေ ရုတ်သိမ်းလိုက်ရင်းပြောတာပါ။
‘ကြည့်ရတာတော့ အားလုံး ကောင်းပါတယ်’
သူ့လက်အစုံ ကျွန်တော့်ငပဲကနေ ရုတ်သိမ်းသွားတော့ ရင်ထဲလစ်ဟာသွားသလို ခံစားရတာထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို လူနာခုတင်ပေါ် မှောက်ပြီး ခြေထောက်တွေကိုခပ်ကားကားထားခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်သိနေတယ် ဘာတွေ လာတော့မယ်ဆိုတာကို သူ့ရာဘာလက်အိပ်စွပ်နေသံတွေကိုကြားရပြီးနောက်မှာပေါ့နော်။
‘ကောင်လေး မင်း prostate ကို ဆရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်တော့မယ် သက်သောင့်သက်သာနေနော် စိတ်ထဲတင်းမထားနဲ့’
ကျွန်တော့်အတွေးမှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ခရေ၀ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တို့ထိကိုင်တွယ်မိတာကိုတော့ သဘောကျမိသလို ခံစားမိတာတော့အရင်ကတည်းကပါ။ အ…ကျွန်တော်အသာလှဲလျောင်းပြီး ငြိမ်သက်နေတဲ့ခဏလက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်တင်သား တွေကိုဖိကိုင်လာပြီး လက်ချောင်းတစ်ချောင်းက ခရေ၀ကို တကယ်ငြင်ငြင်သာသာတို့ထိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူရှိုက်မိလိုက်ပြီး တင်သားတွေကိုကျုံ့ဖြစ်ရော။ ရာဘာလက်အိပ်စွပ်ထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ချောဆီအနည်းငယ်သုတ်လိမ်း ထားကာ ခရေ၀တလျှောက် ဟိုသည်ကစားနေတယ် ရင်ထဲ ကျလိကျလိဖြစ်ရပါရဲ့။ ‘ကောင်လေး မင်း ဖင်ကိုအရမ်းကျုံ့ထားလိုက်ရင် ဆရာလက်ချောင်းလေးတွေ စအိုထဲထည့်တဲ့အခါ အနေရခက်နေလိမ့်မယ်ကွ’ သူက ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ တုန့်ပြန်မပြောမိပါဘူး။ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်ကို ဖိကိုင်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး ပေါင်သားအတွင်းပိုင်းဘက်ကိုဆွဲကိုင် ကာ ‘မင်းခြေထောက်တွေကို နည်းနည်းထပ်ကားလိုက်ဦး ကောင်လေး’တဲ့။ ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေကိုနည်းနည်းထပ်ကားလိုက်ပြန် တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ခမျာ နည်းနည်းဟသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာ ခရေ၀တလျှောက်ပွတ်သပ်ကလိ တာကိုဆက်လုပ်ပါတယ်။ နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်း ချောဆီအနည်းငယ်နဲ့အတူ အခြားနေရာတွေကို ပွတ်သပ်လာတော့ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်နေရာအနှံ့ပွတ်သပ်နေသလိုဖြစ်ပြီး ခရေ၀ကိုချောဆီတွေနဲ့ကလိနေပုံကလည်းကြက်သီးတောင်ထိမိလာပါရဲ့။ မသိမသာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကို ငဲ့စောင်းကြည့်မိတော့ ပေါင်ခြားက ညီဘွားဟာ နောက်တစ်ခါမာတောင့်လာတာကို မြင်လိုက်ရတာမို့ ရှော့ခ်တောင်ဖြစ်သွားမိတယ်။
ဒီဒေါက်တာရဲ့ လက်ချောင်းတွေနဲ့ နှိုးဆွမှုကြောင့် လိင်စိတ်တွေနိုးကြားလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်လိုအခြောက် အမျိုးအစား သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာ မျိုးပါလိမ့်? အာ…ဘယ်လိုတွေဖြစ်တည်လာခဲ့တာလည်းဆိုတာ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။ အ… ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲကို ဒေါက်တာ သူ့လက်ချောင်းလေးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း စတင်ဖိသွင်းပါတယ် ၀င်သွားတဲ့အထိ။ ကျွန်တော့် အပေါက်ထဲ သူ့လက်ချောင်း တစ်လက်မလောက်ဝင်သွားချိန်မတော့ သွင်းနေတာကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ စိတ်တွေကိုလျှော့ထားကာ သူ ပြောတဲ့အတိုင်း ပါးစပ်ဟပြီးရှူရှိုက်နေလိုက်တာကြောင့် လက်ချောင်းဖိသွင်းလာတဲ့အချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာလေးပဲခံစားရပါရဲ့။ ဒါကို သူလည်းသိပုံရပါတယ် လက်ချောင်းကိုဆက်လက်ဖိပြီးသွင်းတယ် နောက်ထပ်သုံးလက်မလောက်ပေါ့။ သူ အဲ့ဒီအနေအထားမှာ ရပ်တန့်ပြန်ရော နောက်တစ်ကြိမ်။ ချောဆီများကြောင့်လားမသိ သူ့လက်ချောင်းတွေ ခရေ၀အတွင်းတစ်ဝိုက်ထိသွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ အပေါ် သက်သောင့်သက်သာပါပဲ။ သူ ကျွန်တော့် prostate ကိုထိကိုင်မိပြီးနောက် စတင်ပွတ်သပ်ကာ စမ်းသပ်ပါတော့တယ် ငြင်ငြင် သာသာလေး လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေနဲ့။ My God!! ပေါင်ခြံကို အသာငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ငပဲက ကျောက်သားအလား မာတောင့်နေပါပြီ။ ဗိုက်သားပြင်ရှိရာကို ကပ်နေအောင် ဒုံးပျံအလားမတ်နေကာ ထိပ်အ၀လေးဟာ အရည်ကြည်အချို့တောင်စို့နေတာကို မြင်ရပါတယ် prostate ကို ပွတ်သပ်လိုက်တိုင်းလေ။ ရှီး….ဖီးလ်အရမ်းကောင်းတာပဲ အာ..။ ဒါဒါ ဂေးတွေ ခံစားရတဲ့ ဖီးလ်က ဒီလိုမျိုးလား? သူတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လုပ်ပေးကြတာ ဒီလိုမျိုးပေါ့? ဒေါက်တာ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေကို ကျွန်တော့် အပေါက်ထဲက အသာလေးဆွဲထုတ်နေစဉ်ဝယ် ခေါင်းထဲပြေးလွှားနေသောအမေးများဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေ ကျွန်တော့် အပေါက်ထဲထည့်တဲ့နေရာမှာ နာရင် အဆင်မပြေရင်ပြောနော်လို့ဆိုလာတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ရုတ်တရက် သတိမထားမိဘဲ ‘မနာပါဘူးဗျ’ ဆိုတဲ့အသံက အားမလိုအားမရသံဖြင့်ထွက်သွားတယ်လေ။ ကျွန်တော့် prostate က နည်းနည်းလေးကြီးနေသလို ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် လိင်ကိစ္စမပြုလုပ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမေးပါတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး သုက်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်က နေဆိုရင်တော့ ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ သူက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီး ကျွန်တော့် ခရေ၀ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပါတယ်။ အခြားဆရာဝန်တွေကတော့ အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ် ပြီးတော့ အဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာဘာမှမပြောခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုတွေ့နေရတဲ့ ဆရာဝန်ကတော့ စမ်းသပ်ခုံပေါ်ထိုင်ကာ ခြေထောက်တွေကို အသင့်တွဲလျောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကွင်းတွေထဲထည့်လိုက်ပါတဲ့ ပိုပြီးမြင်သာထင်သာကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုပဲ။ ‘ဒေါက်တာ….အခြား ဒေါက်တာအချို့ပြောတာတော့ သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးတဲ့’ ကျွန်တော် ခပ်လန့်လန့် အယူခံသဘောပြောမိပါတယ်။ ‘ဆရာ သိပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးကွာ…ဒါပေမဲ့ သေချာအောင် စစ်ဆေးကြည့်ချင်လို့ပါ’ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ငြင်းပယ်လို့ မရတော့ ရွံ့တွန့်တွန့်နဲ့ သဘောတူလိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ငပဲက အခုထိ ဒုံးပျံဖြစ်နေတုန်းဆို တော့ စမ်းသပ်ခုံမှာ ထထိုင်လိုက်ဖို့က အဆင်မပြေသေးဘူးလေ။ စမ်းသပ်ခုံမှာ အသာဝင်ထိုင် ခြေထောက်တွေကို အနည်းငယ်မြှောက် ပြီး ကွင်းလေးတွေထဲ ထည့်လိုက်တော့ မိုးပေါ်ကိုအခုပဲပစ်လွှတ်တော့မယ့် အနေအထားအတိုင်း မတ်နေသေးတာပါ။
လောလောဆယ်အခြေအနေက တော်တော် အရှက်သည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဘယ်တုန်းကမှမတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ စမ်းသပ်ခုံပေါ်ဝယ် ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါစပ်တစ်ခုလုံးနှင့် ခရေ၀ကော အကုန် ရှင်းကနဲမြင်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ ရှိနေရတာလေ။ ကျွန်တော့် ငပဲကလည်း မာတောင့်နေဆဲအပြင် ထိပ်ဝကနေ အရည်ကြည်တွေက ပေါင်ခြံအထိတောင် စီးကျနေသလား ပဲ။ ကျွန်တော် ခုံပေါ်အသာထိုင် ခြေထောက်တွေကို ကွင်းပေါ်ထည့်ပြီး ကားလိုက်တဲ့အချိန် သူ့မျက်ဝန်းတွေက လက်ကနဲဖြစ်သွားတာကို မြင်ရတော့ သူဘာတွေတွေးလိုက်လဲ ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။ သူ ပစ္စည်းကိရိယာတွေထည့်ထားတဲ့ စားပွဲလေးကို ညာဘက်ရှေ့နားဆွဲ ယူလိုက်သလို ထိုင်တဲ့ခုံကိုလည်း ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါတွေနဲ့ သူ့မျက်လုံးတွေတတန်းဖြစ်တဲ့အနေအထားချိန်ကာ ထိုင်ချလိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် ခရေ၀တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ပွတ်သပ်လိုက်ပြန်ကာ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကို ချောဆီသုတ်လိမ်းပြီးထည့်ဖို့လုပ်ပါရော။ ကျွန်တော့် အပေါက်ကို သူစမ်းသပ်နေတုန်း နာကျင်ရင် အညစ်အကြေးစွန့်ချင်သလိုဖြစ်လာရင် သူ့ကိုပြောဖို့တော့ဆိုတယ်။ မနာပါဘူး အဆင်ပြေပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြောမိပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဟိုသည် နာကျင်တယ်ထားဦး သူ့ကိုပြန်ပြောဖြစ်မယ်မထင်တော့ပါ ဘူးဗျာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချောဆီသုတ်လိမ်းထားတဲ့သူ့လက်ချောင်းများရဲ့အထိုးအသွင်းဟာ ငြင်သာသလို စိတ်ထန်အောင်လည်း သာယာမှုပေးနေလို့ပါ။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက ငပဲဟာလည်း မာတောင့်ပြီး မတ်နေတာက ဗိုက်ကြွက်သားတွေနဲ့ ၄၅ဒီဂရီအနေအထား ဖြစ်နေရော။ ကျွန်တော် လိင်တံ ထိပ်အ၀က အရည်ကြည်တွေ ရွှဲစိုထွက်စပြုလာပြန်တယ်။ ဒေါက်တာ ကျွန်တော်ပေါင်တံအတွင်းပိုင်းကို ကြည့်နေသလို ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း အသားကုန်စူးစမ်းနေတာကို ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
‘ဒီလိုလုပ်တာက မင်းကိုစိတ်ကြွအောင် လုပ်သလိုဖြစ်နေလား?’
‘ဟုတ်တယ် ဒေါက်တာ။ ကျွန်တော့် လိင်တံ အရင်က အဲ့လောက်မမာဖူးဘူး။ မဖြစ်ဖူးဘူးဆိုတော့ နည်းနည်းတော့လန့်သလိုရှိသားဗျာ’
‘It’s Ok, သုက်မထွက်တာ ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ မင်း နည်းနည်းတော့ထန်နေမှာပေါ့…ဟူး။ ဆရာဆိုရင်တော့ ကြာကြာဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွ’
Wow….ဒေါက်တာကြီးဘာတွေ လာပြောနေလဲ? ကျွန်တော့်အပေါ်များသူ့သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်မလို့လား? နောက်တော့ အခြားလက် တစ်ဖက်က အပေါ်နည်းနည်းတက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုပွတ်သပ်ပြီး အောက်ကိုဆွဲဆွဲချတယ်။
‘မင်းက တော်တော်လှတဲ့ လိင်ဥ တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲကွ၊ လိင်တံနဲ့ လိင်ဥက ဘက်ညီတယ်…သုက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေမှာပဲနော်’ သူ့လက်ချောင်းအချို့ ကျွန်တော့် အပေါက်ထဲ စတင်တိုးဝင်စပြုလာပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ တုန့်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်မနေတော့ဘဲ လျှောကနဲ နင့်ကနဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်လဲ တော့မသိဘူး နာကျင်မှုမရှိ ချောချောမွေ့မွေ့အဆင်ပြေနေရော။ ချောဆီတွေသုတ်လိမ်းထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းများကြောင့်လည်း အထိတ်တလန့်ဖျစ်ညှစ်မထားတော့တဲ့ ကျွန်တော့်ခရေကြွက်သားများကြောင့်လားတော့မသိပါ။ အာ….အခု သူ့လက်ချောင်းနှစ်ချောင်း ကိုပူးပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေပြီးနောက် တတိယတစ်ချောင်းကိုထပ်သွင်းဖို့သူ စလုပ်တယ်ဗျ။ လုပ်ပုံက နှိုးဆွတာရဲ့အလွန် နာကျင် တော့မှာပဲလို့ ကျွန်တော်စိုးရွံ့သွားပေမယ့် မနာဘူး အဟိ…ယားသလိုပဲ ကလိထိုးသလို။ ခြေထောက်တွေကို တောင့်တင်းမှုတွေ မလုပ် တင်သားတွေကို ဖျစ်ညှစ်ထားခြင်းမရှိ အလိုက်သင့်နေခြင်းရဲ့အဖြေက လေဟာနယ်ထဲ ခုန်ခုန်ဆင်းရသလို ခံစားချက်မျိုးရရှိစေပါတယ်။ အို…ဒေါက်တာနဲ့တော့ခက်နေပြီ သူနဲ့ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကြပါလိမ့်။ ခေါင်းလေးကိုအသာငဲ့စောင်းပြီး အောက်ပိုင်းကိုကြည့် လိုက်တော့ ဒေါက်တာကြီး ပါးစပ်လေးတဟဟနဲ့ ကျွန်တော့ရွှေဥတွေ ခရေ၀တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားနေတယ်။ ကြည့်ရတာ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မျက်နှာအမူအယာတွေက တကယ့်ကို ကျေနပ်သဘောကျလွန်းနေတဲ့ဟန်နဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက် မျက်လွှာလှန်ကြည့်လိုက်ပုံက သူလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လိုမှ မရပ်တန့်နိုင်တော့သလို သူ့ကိုယ်သူ အလွန်ထန်နေပြီဆိုတာကို မထိန်းသိမ်းတော့တဲ့သဘောပါနေပါပြီလေ။
‘မင်း -ဥတွေ အပေါက်ထဲလက်နဲ့အထုတ်အသွင်းလုပ်နေရတာနဲ့ ဆရာတော့ ထနေပြီ။ ဖီလင်ဘယ်လိုလဲကောင်းလား?’ ကျွန်တော် ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သီးထတာလဲမဟုတ် ယားယံတာလည်းမဟုတ် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲဆိုတာသူသိပါ့မလား။ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေဟာ သူ့လက်ချောင်းတွေ အပေါက်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ချိန်တိုင်း ဆတ်ဆတ်ခါသွားမိသလို ကျွန်တော့် ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေဟာလည်း တစိမ့်စိမ့်ယိုတာများ အားပါး..။ ဒေါက်တာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ကားနေသော ကျွန်တော် ပေါင်တံတွေနား တိုးကပ်လာတယ် သူ့လက်ချောင်းတွေ ပိုမိုပူးကပ်ပြီး ခရေ၀ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့။ သူ့လက်ချောင်းတွေ အကုန်လုံး ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲ တိုးဝင်ကုန်တော့မလားမသိဘူး ထူးခြားတာက ကျွန်တော် ငြင်းဆန်လိုစိတ်မရှိတော့တာပါပဲ။ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ခရေကြွက်သားတွေနဲ့ ဖျစ်ညှစ်ကစားမိတော့ ဒါ သဘာဝက သင်ကြားလိုက်တာလား မဆီမဆိုင်တွေးမိသေး တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒေါက်တာရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေ တရွရွဖြစ်နေသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်တာတွေက မြန်လာတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်ကြာကြာထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး….အသားကုန် မတ်ထောင်နေပြီး သကာလ ထိပ်ဝက အရည်ကြည်တွေကလည်းရွှဲနေပြီလေ။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းလိုက်နိုင်တော့ ကိုယ့်ငပဲကိုကိုင်ကာ စတင် -ွင်းထုမိပါတယ်။ အ၀တ်မဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတာ ရှိနေတာကိုလည်း ဂရုမစိုက်နိုင် တော့ဘူးဗျာ။ အဲ့ဒီအခြားသောလူဆိုတာက ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို လက်ချောင်းတွေ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ရူးသွပ်အောင်လုပ်နေသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုဆွဲဆွဲကလိနေတာမျိုးတွေလုပ်နေပြန်တော့ အမလေးတရတော့မယ်လေ။ သူတကယ် ဘာမှဂရုမစိုက်နေတော့ဘူး ထင်တယ် ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူ့လက်နဲ့အသာဆွဲကိုင်ပြီး -ုပေးတယ် အပေါ်ကိုတက်သွားလိုက် အောက်ကိုဆွဲချလိုက် လက်ချောင်းတွေကို တကယ့် အနှေးပြကွက်အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေထဲ ငပဲကို ခါးကော့ကာ ဆောင့်ဆောင့်သွင်းမိတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေက ကျွန်တော့်ခရေထဲကိုမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ့။
စိတ်ထဲမှာ တော်တော့်ကို ထန်ပြီး ထိန်းသိမ်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဝယ် လိင်စိတ်တက်ကြွမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ အရည် ကြည်အချို့ရဲ့အနံ့အသက်တွေ ပျံ့နေသလို ဒေါက်တာကြီးနှုတ်ဖျားကနေပြီး ကျွန်တော်လက်ကစားနေတာကိုကြည့်ကာ မိန့်မူးညည်းညူ တဲ့အသံတွေထွက်လာပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို တစ်ချက် သူအနမ်းပေးတယ်၊ပြီးတော့ ထိပ် အရေပြားနောက်ကိုဆုတ်သွားတိုင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေစို့နေတဲ့ ငပဲခေါင်းလေးရှိရာကို ငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့တို့ပြီး အရည်ကြည်တွေကိုလျက်တယ်ဗျာ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ထက်သန်နေတဲ့ အာသီသတွေကြောင့် တောက်ပနေသလို သူ့အပြုအမူ သူ့ထိန်းချုပ်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို သတိမမူတော့ စိတ်လွတ်သွားပြီထင်ပါရဲ့။ ဒါတွေ ဒါတွေကိုကြည့်ရပြန်တော့ ကျွန်တော့် ငပဲ၊ ရွှေဥတွေ၊ ခရေ၀တွေကို ဒီလူကြီးအတွက် ရက်ရောစွာပေးဆပ်နေမိတာ မတွန့်ဆုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒေါက်တာကြီးရဲ့ ပေါင်ခြံကိုငဲ့စောင်းကြည့်မိပြန်တော့ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲထွားထွားကြီးက သူ့ဘောင်းဘီထဲကနေ ရုန်းကန်ထနေသလို အစိုကွက်ကြီးတစ်ကွက်ကလည်းရွှဲနေရော သူ့အရည်ကြည်တွေကြောင့်ထင်ပါ့။ အာ…မြင်ရတာနဲ့တင် ဘယ်လောက်ထန်နေပြီလဲဆိုတာ ကြက်သီးတောင်ထမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ အခြားသောအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို မမြင်ခဲ့စဖူး၊နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ ခရေ၀တွေ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးတွေကို ဘယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ယောက်ကမှ မလျက်ပြုပေးစဖူး။
‘ဒေါက်တာ…ဒေါက်တာ့ -ီးကြီးကိုအပြင်ထုတ်ကြည့်ပါလားဗျာ’ ကျွန်တော် မရဲတရဲပြောကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မမျှော်လင့် ဘဲထွက်သွားမိတာသေချာတယ် ဒီဘိုးတော်ရဲ့ ကြီးထွားမာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကိုမြင်ချင်းလွန်းလို့ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော့် ရွှေဥတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေတဲ့ သူ့လက်အစုံကိုရုပ်သိမ်းပြီးနောက် သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ကာ ဘောင်းဘီကိုစချွတ်တယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကို အောက်လျောချလိုက်ပြီး ခြေထောက်ကိုကြွကာ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ သူ့ကိုယ်ဝယ် ရှပ်အင်္ကျီလေးရယ် Jock strap ဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်ရယ်ပဲရှိတော့တယ်ဗျ။ ခဏနေတော့ ရှပ်အင်္ကျီကိုပါချွတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် jock strap လေးသာ ကျန်တော့ရာ ခါးစပ်မျှော့ကြိုးပြားခမျာ ရုန်းကန်ထနေသော ငပဲကြီးကြောင့် တင်းနေရော။ သူ့ငပဲခေါင်းဟာလည်း ခေါင်းပြူထွက်နေတာ မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လို့ပါ။ ဒါ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းပဲဗျာ။ အရောင်ခပ်ညိုညို သွေးကြောအချို့ယှက်ဖြာလို့ ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း ကျွန်တော့်ဟာလိုပဲ ခရမ်းရောင်သမ်းစပြုပြီ။ တုတ်တာလည်း အတော်တုတ်သလိုပဲ။ သူ့ငပဲတွေကို ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေ သူ့ဘာသာအသာစတင်ပွတ်သပ်သလို သူ့လက်ချောင်းအချို့က ကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုလှမ်းပြီး နှိုက်ကာ တွင်းချဲ့ပြန်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံး တရှိန်ထိုးပြေးနေတဲ့ ရေနွေးငွေ့မီးရထားစက်ခေါင်းတွေလိုပါပဲ တရှူးရှူးနဲ့ အရှိန်မြင့်နေကြပြီ…အာ…ကျွန်တော်မကြာခင် သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်မိတော့မယ်ထင်တယ်…အ။ ‘ဒေါက်တာ….အဲတာလေးကိုပါချွတ်လိုက်ပါလားဗျာ ဒေါက်တာဟာကြီးအကုန်လုံးကို မြင်ချင်ကြည့်ချင်လို့ပါ’ ကျွန်တော်ရူးတော့မလားမသိဘူး အရမ်းကိုစိတ်ကြွနေပြီ သူ့ဘောင်းဘီလေးဆွဲချွတ်နေတာ စင်တစ်ခုပေါ်တင် လိုက်တာတွေကို လိုက်ကြည့်မိတဲ့အပြင် တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကိုလည်း အငမ်းမရဖြစ်မိတယ်။ အခုတော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အတတ်ကင်းမဲ့နေသလို သူ့လက်ချောင်းသုံးချောင်းစလုံးဟာလည်း ချောဆီအချို့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲအ၀င်အထွက်ခပ်သွက် သွက်ဖြစ်နေရော။ ဒေါက်တာ ငပဲကြီးဟာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့သွေးကြောတွေထောင်ထနေသလို အရည်ကြည်အချို့ထွက်ထားရာ အိုး…. ကျွန်တော် လုပ်သည့်အတိုင်း ဒေါက်တာကြီး သူ့ငပဲကို လက်ငါးချောင်းကော်မီတီနဲ့စတင်မိတ်ဆက်တော့တယ်။
‘အာ..ဒေါက်တာ….အဲဒါကြီးကို ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲထည့်လေဗျာ….အဲဒါကြီးက ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲမှာဆိုပြည့်နေမှာနော်…ရှီး’
ကဗျာကယာ ဒေါက်တာကြီး ကျွန်တော့်အပေါက်ကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ တွင်းချဲ့နေရာကနေ သတိရတဲ့ဟန်နဲ့ အသာဆွဲနှုတ် သူ့ငပဲကြီး ကိုအစားထိုးသွင်းဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ချောဆီတွေပိုမိုညှစ်ထည့်…သူ့ငပဲကြီးကို အဖုအထစ်လေးတွေပါတဲ့ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကိုစွပ်လိုက် ကာ ကျွန်တော့်တွင်းဝမှာတေ့ရော။ သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်အပေါက်ဝနား တရစ်ဝဲ၀ဲပွတ်သပ်လိုက် သွေးတိုးစမ်းသည့်အနေဖြင့် တွန်းတွန်းထည့်ထည့်လုပ်ကြည့်လိုက် လုပ်တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ဖိသွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ သူ့တင်ပါး တွေကိုကျစ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ငပဲကိုတိုးဝင်သည်ထက်ဝင်အောင် လုပ်ပါရော။ အစပိုင်းမှာတော့ နာကျင်ပေမယ့် ချောဆီအကူ အညီရယ် ဒေါက်တာ့ပါးစပ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ ညည်းညူသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ရယ်တို့ကြောင့် သိပ်မရုန်းကန်မိပါ။ တရစ်ရစ်နဲ့ တိုးဝင်လာတဲ့ သူ့ငပဲကြီးဟာ အထုတ်အသွင်းအဆင်ချောတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘယ်လိုများလှုပ်ရှားတယ်မသိ ကျွန်တော့် prostate ကို အကြိမ်တိုင်း ဒုတ်ဒုတ်ထိထိနေတာ ဆီးသွားချင်သလိုတောင်ဖြစ်မိပါတယ်။ အာ….ဒေါက်တာကြီး ကျွမ်းကျင်မှုတွေက ကျွန်တော့်ကို အရူးအမူးဖြစ်စေသလို သူ့အော်ညည်းသံတွေကြောင့်လည်း သွေးပိုကြွရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ညည်းညူသံ တွေကိုကြားပြီး သော့မခတ်ထားတဲ့ အခန်းထဲကိုဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသိနေပါရဲ့။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ အခုအချိန်မှာ အဲလိုဖြစ်မှာ ကို ဂရုမစိုက်ချင်တော့ပါဘူး။ အရမ်းကို စိတ်တွေကြွနေတယ် ထန်နေတာများ တစ်ယောက်ယောက်က အခန်းထဲဝင်လာပြီး ကြီးမားတောင့်တင်းတဲ့ ဒေါက်တာ့ငပဲကြီးနဲ့ အ-ိုးခံနေရပုံရယ် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ကိုင်ကာ အားရပါးရလက်ကစားနေပုံတို့ကိုမြင်စေချင် စမ်းပါဘိ။
တကယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲလိုပဲဗျာ ယောက်ျားအချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံတဲ့…အာ..လိင်ဆက်ဆံခံရတဲ့ဖီလင် ဘယ်လောက် ကြက်သီးထစေခဲ့သလဲမသိခဲ့ဘူး..အခု..တကယ်ပဲ..အာ။ ဘယ်အနေအထားမှာနေနေရတယ် ဘာဖြစ်နေပြီ အရှက်သိက္ခာဘာမှာကို မစဉ်းစားချင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာလည်း ခပ်တွဲတွဲအခြေအနေကနေ ကျစ်ပြီး လိင်တံအောက်ခြေကိုကပ်စပြုနေပြီ မကြာခင် အဆုံးသတ်တော့မယ်။ ဒေါက်တာကြီးက တကယ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အထုတ်အသွင်းလုပ်နေ ဆောင့်သွင်း ထုတ်လုပ်နေတာများ တဆုံးဝင် တဆုံးထွက်ပါပဲ။ သူ့ဆီးစပ်နဲ့ ကျွန်တော့်တင်သားတွေများ ရိုက်ခတ်သလားမသိဘူး တဖတ်ဖတ်အသံတွေကိုထွက်ရော။
‘ဒေါက်တာ…ဒေါက်တာ….အာ…သွက်သွက်လေး….ဆောင့်…အာ ဟုတ်တယ်…ရှီး…ခပ်ပြင်းပြင်း အ အ’ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက မရပ်မနား တောင်းဆိုမိပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ဒေါက်တာက ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့အစားထိုးပစ်လိုက်တယ်ဗျာ။ သူ့ခါးက စက်သေနတ်ပစ်သလို လှုပ်ရှားရင်း သူ့လက်တွေက လည်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုအားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ လက်သရမ်းတယ်လေ။ အိုး….အဲ့ဒီဖီလင်က အရမ်းမိုက်တာဗျ သိလား….ကြက်သီးထ သလိုဖြစ်လိုက် ဖင်ကြွက်သားတွေကို ယောင်ရမ်းညှစ်ပြုမိလိုက် ငပဲထိပ်ဝ ပြူတစ်ပြူတစ်ဖြစ်လာတဲ့ သုက်ရည်တွေမထွက်အောင် စိတ် ထိန်းလိုက်နဲ့ပါပဲ။
သူတကယ်ကြီးကို ကျွန်တော့်ငပဲကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကစားနေတဲ့အပြင် သူ့ငပဲကြီးကို ကျွန်တော်အပေါက်ထဲ နင့်ကနဲ နင့်ကနဲနေအောင် အထုတ်အသွင်းလုပ်တာဆိုတော့ သူတစ်ချက် တစ်ချက်ဆောင့်တိုင်း ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို တောင့်တင်းပစ် လိုက်မိသလို ပါးစပ်ကလည်း မနေနိုင်စွာ ညည်းညူမိပါတယ်။ ‘အာ…-ုပေးပါ ဒေါက်တာ…အာ….ဆောင့်…ဆောင့်ပါ ဒေါက်တာ… ခပ်ပြင်းပြင်း….အ…အ မြန်မြန်လေး…ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်’ ဒီလိုစကားလုံးတွေကို ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောမိတာများ ယုံတောင် မယုံချင် သလိုဖြစ်နေသလားလို့ အရင်က ဆဲတောင်မဆဲဆိုတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးလဲ ပူနွေးနေတာ ပြီးတော့….ချော်ရည်တွေပန်းထွက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီ။
‘အတူတူပြီးရအောင် ဒေါက်တာ….အာ…အတူတူပြီးရ အား…ရှီး’
‘မင်း -င်ထဲမှာ ပြီးလိုက်တော့မယ်…စီးကြပ်နေတာပဲ…အာ’
သူ့ပါးစပ်က ညည်းညူပြောဆိုသံတွေက လှိုက်ခုန်နေသလိုပဲ ကတုန်ကယင်နိုင်လှသလို သူ့ခါးသွက်ပုံများ လူငယ်တွေလိုက်မမှီအောင် စက်သေနတ်တစ်လက်ပါပဲ။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲအရင်းကိုအသာဆုပ်ကိုင်ထားသလို အခြားလက်တစ်ဖက်က အပေါ်ပိုင်း ကို လျောတိုက်ကိုင်တွယ်ကစားနေတာကလည်း တကယ့်ဆရာကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ချောက်ကမ်းပါးအစွန်ကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန် အခါလေးဖြစ်ရော။ ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲကို သူ့ငပဲကြီးနဲ့အထုတ်အသွင်းခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်နေတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော့်ငပဲ အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ကစားနေတာက အမြန်ဆိုတော့ အသံတွေက မကြားချင်မှအဆုံးမြန်ဟည်းနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ကျွန်တော် မထိန်း နိုင်တော့တာကြောင့် ခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲ အော်ဟစ်ညည်းညူမိသလို ‘ပြီး…အို အို အို…ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် FUCK ME!! ဒေါက်တာ’ လို့တောင်းဆိုတော့ သူကလည်း ‘မင်း….မင်း….-င်ထဲမှာ ပြီး…ပြီးနေပြီ’ လို့ပြန်အော်တယ်။ ခပ်သွက်သွက်ကစားနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်း တွေထဲကနေ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေ ခုန်ပျံထွက်လာတာဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာတွေ ရင်အုပ်တွေပေါ်အများအပြား ရောက်ရှိဆင်းသက် ကုန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဖင်သားတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ သူ့လိင်တံအရင်းကသွေးကြောကြီးများလှုပ်ရှားမှုကြောင့် သူသည်လည်း ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲကို ပူနွေးနေတဲ့သုက်ရည်တွေဖြည့်ပေးနေပြီလို့ အသိနဲ့သတိရှိနေရပါရော။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား မိနစ် အနည်းငယ်လောက်တော့ လုပ်လက်စ ထိုးသွင်းဆက်ဆံတာတွေ အရှိန်မပျက် အော်ဟစ် ဖျစ်ညှစ်တာတွေကို ဆက်လုပ်နေကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ငြိမ်သက်စွာ တဖြည်းဖြည်း အေးဆက်သွားပါတော့တယ်။
Alex Aung (2 Dec 2014)
Posted by Alex Aung at 3:58 PM
ဘာသာရေးအယူအစွဲပြင်းထန်သော မိဘများကို ဘယ်လိုဖွင့်ြေ...